Taageereyaasha kooxda kubadda cagta Liveprool ayaa si degdeg ah baraha bulshada ugaga falceliyey guul-darradii weynayd ee kooxdooda kasoo gaadhay xiddiga reer Germany ee Timo Werner oo ay Chelsea ku garaacday saxeexiisa.
Reds ayaa bilihii ugu dambeeyey si weyn loola xidhiidhinayey dhaliyaha RB Leipzing oo la rumaysnaa in Jurgen Klopp aanu ka daahi doonin inuu shubo £52 milyan oo heshiiskiisa lagu burburin karayey, waxaana shalay la ogaaday in qodobka cayimaya lacagta lagula saxeexan karayo uu kaliya shaqaynayo inta ka horreysa June 15.
Chelsea ayaa fiidkii hore ee caawa gacanta ku dhigtay dhaliyahan awoodda badan oo ay kasoo bixisay £53 milyan oo Gini, iyadoo 24 jirkan uu dhamaadka xili ciyaareedka u duuli doono magaalada London oo uu kaga biiri doono kooxda tababare Lampard oo sidoo kale isku diyaarinaysa inay horraanta bisha July garoonkeeda Stamford Bridge kusoo dhoweyso Hakim Ziyech oo ay kala soo saxeexatay Ajax.
Werner ayaa qalinka ku duugay heshiis uu usbuucii ku qaadanayo 10 milyan oo Euro oo socon doona muddo shan sannadood ah oo uu kula shaqayn doono Blues iyagoo afka hore wadaagi doona Tommy Abraham.
Markii uu soo baxay warka heshiiska ay Blues la gaadhay weeraryahanka reer Germany, waxa falcelin degdeg ah baraha bulshada ka sameeyey taageereyaasha Liverpool oo filayay in laacibkani uu kooxdooda iman doono.
Mid ka mid ah taageereyaasha Reds oo barta Twitterka ku isticmaala magaca hal-hayska kooxda u ah ee You’ll Never Walk Alone ayaa waxa uu canaan dusha uga tuuray masuuliyiinta naadiga, waxaana uu qoraal uu soo dhigay bartiisa ku yidhi: “Tani mar walba way dhici doontaa. Sannadahan waa qaabkii Nabil Fekir. Liverpool mar kale ayay nafteeda qiyaasaysay, Timo Werner na wuxuu ka daalay sugitaankeeda. Waa wax si dhab ah looga xishoodo, laakiin waa natiijo caddaan ah IMO. Wuxuu u noqon doonaa Chelsea saxeex wanaagsan, wuxuuse kaga sii fiicnaan lahaa ciidamada dhar-casta ee Klopp #LFC”
Taageere kale oo wali rajo ka qaba in saxeexa Werner ee Chelsea uu dhalanteed yahay oo ay Liverpool ka hor qaadi doonto, ayaa qoraal ku yidhi: “Wali waxba lama shaacin. Ma laga yaabaa inay innagu riixayaan inaynu tallaabo qaadno?”
Taageere kale ayaa isaguna soo qoray: “Waxaan u malaynayaa in Koobka Qaramada Afrika uu yahay bisha January iyo da’da saddexda afka hore, Liveprool waxay u baahan tahay hal ciyaartoy oo kale oo ay ku beddesho. Horyaalka kale waxay ka quusanaysaa January-February marka ay baxaan Mane iyo Salah.”
Mid ka mid ah taageereyaasha oo niyaddiisu wanaagsan tahay ayaa isaguna soo qoray: “Dadku waxay u baahan yihiin inay is dejiyaan oo ay xasuustaan kuwa aanu marka horeba haysanay.”
Mark Fitchen oo taageereyaasha Liverpool ah ayaa isaguna weeraray qaab-ciyaareedka Timo Werner, waxaanu yidhi: “Allah ayaa mahad leh. Waxaan daawanayay isaga (Werner) xili ciyaareedka oo dhan. Isagu ma aha Mane ama Firmino. Haddii Mane uu tegi lahaa, waxaan mar walba soo qaadan lahaa Havertz.”
Taageere kale oo daacad hadlay, ayaa waxa uu isna si kooban u yidhi: “Waa khasaare”